Kukurumidza kukudana! : Martin Vrijland
Akaiswa mukati NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	musi wa 12 March 2019	• 6 Comments
Iyo inguva inonakidza, nokuti kushorwa kwebasa rangu rokunyora rokuzvinyora kunotakura zvakakura. Izvi zvinoreva kuti kurairirwa kwepa Facebook kwakakura kwazvo zvokuti nhamba yevashanyi vanobva kuIndaneti kusvika pawebsite yangu yakawa zvikuru. Izvi zvinoratidzika kubva kuhuwandu. Kunyange kana mashoko akagoverwa mazana emakamwe, nhamba yevaverengi vanosvika panzvimbo yangu yepaIndaneti haiti kuwedzera. Zviri pachena kuti pane rakaoma censute lock pa Facebook uye izvo zvinoreva kuti rusununguko rwekutaura pamapepanhau ruchiripo, asi mukuita hapana munhu angoriona zvakare. Chinhu chipi nechipi chinokanganisa kubva kune chinorambidzwa kana chinopikiswa chinopesana chinangwa hachigoni kuratidzwa. Zvakanaka kuva nevateveri ve18 chikamu pa Facebook, asi havangooni mharidzo yangu kana kuti havasati vavaona zvakare.
Sei uchifanira kufunganya nezvazvo? Nokuti vanhu vazhinji vanongotarisana nemafungiro ekucherechedza kwebhokisi rekudhindwa rezvinyorwa zvemashoko makuru uye mamwe maitirwe akachengetedzwa. "Zvakanaka uye, vanhu vakangwara ivo pachavo", iwe unogona kufunga. Iniwo handifungi kuti vanhu mapenzi; Ndinongotaura chete kuti kutamba kwave kwakanyanyisa zvokuti pane dzimwe nguva zvakanaka kunzwa inzwi rechokwadi rakazvimirira. Ndinofunga kuti ndakaratidza kuti ndinotya kusimudza zvinhu izvo kupikiswa kunodzorwa kunokonzera pasi, kuderedza kana kukanganisa.
Kana iwe uchida kuti izwi iri rakasununguka rirambe riripo, ipapo rubatsiro rwako runonyanya kukosha. Ndinofanira kutakura zvose zvinodiwa zvewebsite ino uye nokuti ndaisa musoro wangu kumusoro kwepamusoro pevhu zita rangu rakanyanyiswa pamhepo, zvichiita kuti zvive nyore kuunza mari. Kutevera zviitiko zvezvino uye kuwana kukurudzirwa kwekunyora ndeye nzvimbo dzakawanda dzewebhu dzinoita nekubatsira kwekambani kanyori. Zvichida vanewo (AIVD) rubatsiro remari. Ndinoita zvinhu zvose kubva paA kusvika Z ndiri ndoga uye ndinofanira kurarama pasina mari. Izvozvo zvinoreva kuti ini handiiti chete kutarisira seva, web design nekugadzirwa kwehuchenjeri, asi zvakare nyora zvinyorwa zvose ini uye unofanira kurarama pane rutsigiro rwako. Izvozvo zvingaratidzika sechidimbu chekeke, asi fungisisa kuti mawebsite akawanda anobata pamwe nevaridzi vakawanda uye zvichida vane bhajeti guru ravanogona.
Ini ichangobva kuisa 500 euro mukunyorera zvakare purogiramu yePPP yakabuda apo webhusaiti inoenderera mberi, nokuti iyi code haina kushandiswa zvakare. Iri ibasa rinodhura kune munyori anoedza kuchengeta musoro wake pamusoro pemvura. Iwe webhusaiti ikozvino inoshanda zvakanaka zvakare. Chimwe chinokanganisa ndechokutsvaga nzira dzekudzivirira kuongorora.
Kwete kuchema, asi kukumbira nokukurumidza kuti uve nhengo uye kutsigira, nokuti zviri kuwedzera kuoma kuramba uchifamba. Shandisai nhau kuburikidza nemamwe mashoko, e-mail kana nepeti kuvanhu pawebsite yangu, asi ndatove: Iva nhengo. Rutsigiro rwako runodikanwa nokukurumidza! Ndatenda mberi!
Tags: mhiko, Featured, nhengo, Martin Vrijland, kutsigira
12 March 2019 pa 22: 10
Kune zvakawanda zvekukurukurirana zvikwata, inguva yekurasa Facebook, vane chimwe chinhu nekutarisa kwavo.
Ndinokuona iwe Martin pane chikamu chemaIndaneti isina kubhadhara, zvakakosha kuisa mairi ikozvino, iwe une rubatsiro rwangu!
13 March 2019 pa 10: 53
Kuti pane zvakawanda zvakasarudzwa ndezvangu, mumaonero angu, kunyanya dambudziko. Vanhu vanogona kusarudza kubva kune zvakawanda zvemashoko ezvinyorwa uye mapuratifomu ayo nguva yekupamba kwemhirizhonga yevanhu yakadzoka, asi nenzira yakasiyana ... yakawanda zvikuru yakanyanyisa.
Yaiwanzove yakananga kune nyika yekunze iyo yaive yeboka raiyo, ingava kana kusabatanidzwa nechitendero. Kana iwe usati uri weboka chero ripi zvaro kana koromo, iwe hauna kubatanidzwa mune chimwe chinhu uye naizvozvo iwe hausi werimwe chinhu. Mazuva ano ose aya mapuranga akanyangarika kunze uye iwe unosarudza kumashure kwekombiyuta kana smartphone iyo iwe uri boka rako uye iwe unowana ruvara rwemashoko.
Iyi ruzivo uye nzira yehupenyu yakasvibiswa uye inotsausa, sezvakaitwa mumazuva ekare panguva yeshongwe, panzvimbo pekushandisa ruzivo rwakabva kune chokwadi. Zvinowanikwa nevanhu vakawanda (kana kwete) zvine chokuita nekuwedzera kwebasa ravo mazuva ano kazhinji asingazivikanwi. Kunyange izvo vanhu chaizvoizvo vanoita nokuda kwebasa ravo zvakavanzika, sezvakanyorwa mubasa rechibvumirano nechirevo chechirango. Gweta hazvirevi kuti ari kutumira tsamba dzokutyisidzira kune vagari vasina mhosva, nokuti mutengi wake anopa zvakawanda nokuda kweiyo ... kungopa kupa muenzaniso. Vanhu vanofarira kuchengetedza maonero uye kutarisana nezvinhu zvisinganzwisisiki kune nyika yekunze, kuitira kuti varege kuisa njodzi yekuwanika isingazivikanwi, yekutariswa nemitsipa yavo uye yekurasikirwa nechinzvimbo chavanowana.
Vanhu vanofanira kunyengetedzwa nenzira imwe kana imwe kuti vatarise Martin Vrijland ivo pachavo. Izvo zvakaoma zvikuru nokuti pane dzakawanda zvakapesana zvinopesana. Ndezvipi zvingaita kuti pane kushorwa kwakanyanya kunodzorwa? Zviri pachena kuti nhema idzi dzakazara zvokuti chokwadi chakakwana zvakaoma kuona pamwe nekudzivirirwa kwedu kuziva. Vanhu vazhinji vanoramba apo pavanoona kusaruramisirwa munzvimbo yavo yakatarisana kana kana vachiona dzimwe nhema mumutemo. Vanhu vevanhu vazhinji havasi varwi, asi vakanaka makwai. Chero kana makwai awa achitanga kuona kuti ari kuenda kumucheka wekucheka, ivo chete vakagadzirira kuita chimwe chinhu. Asi zvinosuruvarisa, kunyange zvakadaro, makwai akawanda anotanga kuchema kana kuputsika mupfungwa, kuitira kuti arege kuramba. Saka tinofanira kutarisa makwai okurwa!
Vane simba uye vanofa-vakaoma chokwadi vanotsvaka chokwadi vachauya nokukurumidza kana kuti gare gare kuMartin Vrijland webhusaiti, asi isu tinosvika sei kumakwai aya anorwa?
13 March 2019 pa 03: 31
13 March 2019 pa 11: 28
Ndinonzwisisa iwe unoreva zvakanaka.
Asi ndinofunga kuti munyori uyu anoshandisa Facebook zvakajeka nokuti vanhu vose varipo imomo (vachitaura nezvezvipfuwo zvemhuka)
Asi ndezvipi mapurisa aunozvigadzirira?
17 March 2019 pa 12: 27
hey keazer, hongu k vanonzwisisa kuti FB ndiyo nzvimbo yakakodzera yekusvika kuvanhu vose, vakashandisa FB kwemakore mashomanana ini, ndakaonawo kugadziriswa kweFB, dzakawanda nyaya dzakabviswa kubva kune 30 zuva badzi kana zvakakwana, kubhadhara kweaisapp, FB ikozvino yakakura kana ichienzaniswa nedzimwe rutivi pamusoro pe data. Handina ruzivo rwakawanda kune mamwe mapurisa, asi pane makumi gumi nemaviri ane 80 kune zvinyorwa zvemamiriyoni e300 zvinogona kupa imwe nzira. Kana munhu akava mukuru uye ane simba, munhu wacho anogona kuchinja kuti asunge simba iri. Pakutanga kwevhiki ino, FB yakavhara Zero rusvingo, mushure mekunyanyisa kwekutsvaga paIndaneti asi kunyange mune zvematongerwo enyika, zvinhu zvose zvakashandurwa mukati meawa 24 uye FB yakaratidza kuti yakanga yaita kukanganisa kwemukati, ichi chakanga chakanganisa kana kuti zvimwe zvaizoita kupikisa test, ndiani anoziva. nokuti ini pachedu ndinotaura bye bye FB
13 March 2019 pa 16: 51
Martin anokwanisa kutsigirwa. Kune vose vanopa simba rangu maererano nekugona kana kuti kuva nhengo. Izvi zvinofanira kunge zvichibvira. Martin ndiye chete uyo asina pasi pekutonga kwenyika !!!!
« BREAKING: Alamu huru yenjodzi yenyika yenyu iri pedyo!
49 yakaponda mukurwisana pamasikiti maviri muna Christchurch New Zealand »
Total Visits: 11.626.681